Ukwenza iprofayili ye-B2B kunye nokujonga ngeMintigo | Martech Zone
Emva kokushiya ishishini lamaphephandaba, omnye wemisebenzi yam yokuqala yayikukuphuhlisa iziseko zedatha yabathengisi beB2B. Sisebenzisa izixhobo zomntu wesithathu, siphuhlise iindlela zokuphuhlisa isalathiso sesiko kwiimpawu eziqinileyo kwisiseko sabathengi bakho. Ngamanye amagama, singachonga abathengi bakho abafanelekileyo ngengeniso, inani labasebenzi, iikhowudi zeshishini, iminyaka kwinkonzo, indawo kunye nolunye ulwazi esinokulufumana.
Nje ukuba sazi ukuba ujongeka kanjani umthengi oqhelekileyo, siza kuzisebenzisa ezo profayile ukufumana amanqaku eenkcukacha. Awunyanzelekanga ukuba uze nomdlalo, into ekufuneka uyenzile yayikukubeka uluhlu lwezinto ezilindelekileyo… ngubani obonakala esondele kakhulu kubathengi bakho xa kuthelekiswa nabakhangeleka bancinci njengabaxhasi bakho. Kwakunzima ngakumbi ukusukela kwisalathiso kunye nokufumana amanqaku kudityaniswa nezalathiso ze-multivariate… kodwa ezo ziziseko.
Kubonakala ngathi ngabantu IMintigo bathathe le ndlela, bayifaka kwiwebhu, kwaye bayifaka kwi-steroids!
The IMintigo Uluhlu lwesiza 5 izizathu zokusebenzisa inkonzo yabo:
Fikelela abaphulaphuli abafanelekileyo -Ulwazi olupheleleyo noluchanekileyo kubo bobabini abantu nakwiinkampani likuvumela ukuba udlule kubagcini-masango kwaye unxibelelane ngokuthe ngqo nabenzi bezigqibo, ukuphucula imibhobho, inqanaba lokuvala, kunye nomjikelo wentengiso.
Ukunyusa ukusebenza kwePayipi -I-Mintigo engaphezulu ikhokelela kuguquko kwintengiso kunakwiminye imithombo, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 zentengiso ngemini, ngokophando lwabathengi beMintigo.
Ukuhamba ngokulula, okuQikelelwayo kokuhamba -Kukuthatha imizuzu emihlanu ukugcwalisa amandla ekhokelo yenyanga- vumela uMintigo akwenzele ukuphakamisa okunzima ngokuhambahamba kwemikhombandlela eqinisekisiweyo yeMintigo. Abasebenzi bakho bezentengiso banokuqhubekeka ngakumbi kukhokelela ngokuzithemba ukuba imibhobho yabo iya kuhlala igcwele.
Mfutshane kwiMijikelezo yokuThengisa -I-Mintigo ipakisha ukuqonda ngakumbi kunxibelelwano ngalunye kuba isikhokelo ngasinye sihambelana neprofayile yomthengi wakho ophakamileyo. Izikhokelo eziqinisekisiweyo zeMintigo zisa kumaqela athengisa ulwazi abaludingayo ukuze benze isicwangciso esisebenzayo seakhawunti kwaye bayeke abathengisi ukuba bangene kwiithagethi zamaphulo ahlukeneyo.
Yenza imijelo yeNgeniso eNtsha -I-Mintigo ityhila amandla eemarike afihliweyo ngokuskena ngaphezulu kwe-10 yezigidi zeenkampani ezinethemba lokufumana, ezihambelana noko ngokusekwe kwiimpawu ezinzulu, kunokuba ibe lulwazi nje oluqinileyo. Abathengi bafumanise ukuba ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90 zekhokelo zeMintigo zazintsha kubo - nkqu nakwiimarike sele bezihlolisisile besebenzisa uluhlu.
Umbulelo okhethekileyo kumhlobo kunye nomthengi u-Isaac Pellerin, uMphathi weNtengiso weRhafu kwiTinderBox, ngokukhomba le nkonzo kum. Ibhokisi yetinder iyi Isoftware yokuthengisa Oko kwenza ukuba kube lula kuwe ukuba wenze, uhlele kwaye ulandelele izindululo zokuthengisa. Siyayisebenzisa kwaye siyayithanda!
tags: b2bIsizukulwana esikhokelayo se-b2bb2b ukukhangelab2b amanqakumintigo